घरमा श्रीमती हुदाहुदै सुटुक्क दोस्रो बिहे गर्दागर्दै जेठी श्रीमती विवाह मण्ड, पमा आएपछि भागा’भाग (भिडियो सहित) – Ap Nepal
घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी भित्र्या’उन खोज्ने एक पुरुष विवाह मण्डपवाट लखेटिएका छन् । विवाह गर्दै गरेका ति पुरुष’को यस अघि एउटा मात्र होइन दुईवटा विवाह भइस’केको बताएपछि खैला’बैला मच्चिएको थियो ।
कान्छी भित्र्याउने तयारीमा मण्डपमा नयाँ बेहुली संग बसेको बेलामा बेहुलाकी जेठी श्रीमती’को इन्ट्रि भयो । उनले ले नयाँ बेहुलीलाई उनका बेहुलाको पहिले नै एकजना होइन, दुईजनासँग वि’वाह भइसकेको जानकारी दिएपछि खैलाबैला मच्चियो ।
धोका दिएर विवाह गरेको थाहा पाए’पछि नयाँ बेहुलीका आफन्तले नै उनलाई लछारपछार पारे र मण्डपवाट लखेटे । करिब ३३–३४ वर्षका आसिफ राफिक सिद्दीकी नयाँ बेहुलीका आफन्तले नै लखेटेका हुन् । यो घटना पाकिस्ता’नको हो । उनीबारे यस्तो जान’कारी सार्वजनिक भएपछि रिसाएका भीडले उनले लगाएको सर्ट र पाइन्ट दुबै च्याति’दिएका छन् ।
भीडबाट बच्न’का लागि बस मुनी लुकेका बेहुलालाई पछि अपरिचित व्यक्तिले बचाएका छन् । पाकिस्तानमा बहुवि’वाह वैध भएपनि उनले छल गरेर विवाह गर्न लागेका थिए । एक व्यक्तिले चार’जना श्रीमती राख्न पाउने धार्मीक र कानु’नी अधिकार छ । तर त्यसका लागि पहिलो श्रीमतीको अनुमति भने लिनुपर्छ ।
घटना’को भिडियो पनि सो’सल मिडियामा सार्वज’निक भएको छ । भिडियोमा देखिए अनुसार विवाह स्थलमा एकाएक एक रिसाए’की महिला प्रवेश भएपछि एक व्यक्ति’ले प्रश्न गर्छन्, ‘बहिनी के भयो ?’ मदिहा सिद्दीकी नामकी ती महिला सबै बेलिबिस्तार लगाए’पछि त्यहाँको माहोल परिवर्तन हुन्छ ।’
‘उनी मेरा श्रीमान् हुन्, र उनी यो बच्चा’को बुवा पनि हुन् । उनले मलाई आफू तीन दिनका लागि हैदराबाद जाने भनेर झुटो बोलेर यहाँ आएका हुन् उनले भिडि’योमा भनेको सुन्न सकिन्छ । त्यसपछि उन:लाई केही पर राखेर कुरा&कानी गरियो । त्यस’पछि उनले नयाँ बेहुलीसँग पनि कुरा गरिन् । ‘तिमीलाई थाहा थिएन ? उनी मेरा श्री’मान् हुन् ? उनले यो अबोध बालकको पनि ख्याल गरेनन् ।’
मदिहाका अनुसा’र उनले आसिफसँग सन् २०१६ मा विवाह गरे’की थिइन् । कराँची फेडरल उर्दू युनिभ’र्सिटीमा भेट भएपछि उनीहरुबीच प्रेम बसेको र विवाह गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
त्यसपछि आसिफले’ सन् २०१८ मा जेहरा असर’फसँग गोप्य रुपमा दोस्रो विवाह गरेको समेत उनले नयाँ बेहुलीलाई बताइन् । श्रीमा’नकी नयाँ श्रीमतीको मेसेज देखे&पछि उनले दो_स्रो विवाह गरेको थाहा पाएको मदिहाले बताइन् ।
सुरुमा आफूले दोस्रो विवाह गरेको अस्वि’कार गरेपनि पछि श्रीमानले उक्त कुरा स्विकार गरेको मदि’हाले जानकारी दिइन् । जेहराले नै उनलाई श्रीमानले तेस्रो विवाह गर्न लागेको भन्ने जानकारी दिए’को उनले बताइन् ।- एजेन्सी
Prevश्रीमानले छोडे, ८ बर्षको छोरालाई व्लड क्यान्सर भयो, बचाईदिनुस भन्दै आमासँगै छोरा पनि धरधरी रोए (भिडियो सहित)
Nextसन्तोष देउजा आमा सहित पहिलो पल्ट मिडियामा, यस्तो कुराले धर-धरी रोय सन्तोष (भिडियो सहित)
रमेश प्रसाई र कल्पनाले इन्द्रेणीमा हैसानुमा दोहोरी खेलेपछि गीतका गायक गोकुल आ, क्रोश,पर्यो च’र्का’चर्की (भिडियो सहित)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (40087)